Torrijas ronono voahandro | Recipe ao an-dakozia
Torrijas ronono voaendy
Toñy Torres | | Recipe de paska
Torrijas no zava-mamy amin'ny Paska any Espana, na dia tsy izy irery aza. Mora ny manomana mamy izay efa niaraka tamintsika hatrizay, na izany aza, dia kaloria loatra ary tsy noho ny akora ilaina ihany, fa noho ny fomba fanomanana azy ihany koa. Saingy azo atao ny mampihena ny tavy amin'ny toast frantsay, mila manova ny fomba fanomananao azy fotsiny ianao.
Ny lafaoro no mpiara-dia aminao ao an-dakozia, io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra mitahiry kaloria sy tavy foana amin'ny sakafo. Na dia manomana fandroana aza ianao dia afaka mampiasa ny fatanao ary hahazo lovia maivana kokoa ianao. Ireo torrijas ireo dia mbola matanjaka, satria ny akora dia mitovy amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny fanomanana an'io mamy io, fa farafaharatsiny, mamonjy tavy isika amin'ny fisorohana ny fikendasana. Manazava ny dingana tsikelikely izahay, ankafizo izy ireo!
Mofo manokana ho an'ny mofo frantsay toast
½ litatra amin'ny ronono manontolo
Siramamy 6 sotro fihinanana
Ny hoditry ny voasarimakirana iray
Hazo kanelina 1
Apetrakay ao anaty vilany ny ronono ao anaty afo ary ampio ny voasarimakirana, hikarakarana fa tsy manana ilay faritra fotsy izy io.
Ampiarahinay koa ilay hazo kanelina ary avelantsika hahandro amin'ny hafanana ambany izy ary hikorontana indraindray.
Rehefa manomboka mangotraka ny ronono dia esory amin'ny afo ary ampio ny siramamy.
Atsofohy tsara ary tahirizo ny ronono mandritra ny fotoana mampidirany azy, mandritra ny 15 minitra farafahakeliny
Mandritra izany fotoana izany dia hanapaka ny mofo ho tonga silaka roa sahabo ho roa ny hateviny.
Afanaina hatramin'ny 200 degre ny lafaoro ary manamboatra lovia fanendasa miaraka amina ravina taratasy greaseproof.
Sakanay ny ronono hanala ny fitsaharana.
Ankehitriny dia hanomana ny torrijas isika, mandena ronono aloha isika, avy eo mamaky ilay atody nokapohina ary mametraka azy eo amin'ny fitoeran-diloilo.
Ampahafantarinay amin'ny lafaoro amin'ny lafaoro ny lovia avo indrindra.
Avelantsika ho volontany ny torrijas amin'ny lafiny iray ary hamadika azy ireo.
Raha vantany vao vonona izy ireo, dia mandalo siramamy sy kanelina ary mifangaro ao anaty loharano lalina isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » Fotoana manokana » Recipe de paska » Torrijas ronono voaendy
Spinach sy Salady Stroberiana